15th September, 2021 Wed ०९:४५:३८ मा प्रकाशित
पार्टीभित्र दादागिरी गरेर निर्वाचित कमिटीलाई विघटन गर्ने, कहिले पन्ध्र सय पनि बनाउने, त्यसैलाई एघार सय पनि बनाउने यो कस्तो तरिका हो । आफुले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ ? आफै वैधानिक छैनन, हामीलाई के कारवाही गर्ने ? संसद विघटन गरेकालाई संसदमा आउने अधिका
जुन पार्टी अवैध छ । जसले विधि, प्रकृया, संविधान, नियम कानून मिचेर काम गरेका छन्, त्यस्ताले हामीलाई कारवाही गर्नु पर्छ भन्नु आफैमा हास्यस्पद छ । उनीहरुको मागको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । उनीहरुले दुई दुई पटक हत्या गरेको संसद जसले पुर्नस्थापना गर्यो, उसैलाई कारवाही गर भन्ने अधिकार उनीहरुलाई कसले दियो ? कुन मुखले उनीहरु आफैले हत्या गरेको संसदमा उपस्थित भएका छन् ? उनीहरुले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई उलङ्घन गरिरहनुभएको छ । जसले संविधान, विधि, प्रकृया, कानून मिचेका छन्, उसैले संविधान, विधि र सिद्धान्तको हौवा पिट्नु आफैमा गैह्रजिम्मेवार र अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । उनीहरुका हर्कतलाई अदालत समेत गलत भनिसक्यो । उनीहरु संसदमा उफ्रिनुको कुनै औचित्य छैन ।
उहाँहरुले नवौं महाधिवशेनको विधानलाई उलङ्घन गर्नुभएको छ, विधि, प्रकृया मिच्नुभएको छ । आफुखुशी केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्नुभएको छ । मन लागेकालाई जिम्मेवारी तोक्ने र हटाउने काम गर्नुभएको छ । त्यो पार्टीको अवैधानिक अध्यक्ष र उसले गरेको कारवाही लिएर संसद अवरुद्ध गर्नु र सभामुखलाई धम्क्याउनुको कुनै औचित्य छैन ।
कुनै दलले आफ्ना सांसद वा सदस्यलाई कारवाही गर्न विधान बमोजिम पार्टीको बैठक बसेको हुनुपर्यो । त्यस बैठकले निर्णय गरेको हुनुपर्यो । ती सबै कुरा लत्याएर एकोहोरो संसद अवरुद्ध गर्ने अधिकार उनीहरुलाई छैन । यस्ता अलोकतान्त्रिक र गैह्र संवैधानिक कारवाहीले केही हुने वाला छैन ।
संसदमा सभामुखले संविधान संवतरुपमा गरेको काम कसरी असंवैधानिक भयो ? आफु हुँदा गरिएका असंवैधानिक कार्य सबै संवैधानिक हुने अनि अर्काले गरेका संवैधानिक काम सबै असंवैधानिक हुने खालको प्रवृत्ति उनिहरुमा छ, त्यो गलत छ । विपक्षीको कर्तव्य के हो, त्यो उहाँहरुले जान्ने कुरा हो । उहाँहरु नबुझ्दासम्म उफ्रिनु हुन्छ, बुझे पछि आफै थचारिनु हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा कुनै पनि दल जिम्मेवार, लोकतान्त्रिक र संविधानको दायरामा बस्नु पर्छ । विधि, प्रकृया, विधान, नियम, कानूत बमोजिम क्रियाकलाप गर्नुपर्छ ।
अहिलेको सिस्टमलाई उहाँहरुले नमान्न खोजेका मात्र हुन् । पार्टीभित्र दादागिरी गरेर निर्वाचित कमिटीलाई विघटन गर्ने, कहिले पन्ध्र सय पनि बनाउने, त्यसैलाई एघार सय पनि बनाउने यो कस्तो तरिका हो । आफुले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ ? आफै वैधानिक छैनन, हामीलाई के कारवाही गर्ने ? संसद विघटन गरेकालाई संसदमा आउने अधिकार पनि छैन । उनीहरु संसदमा होहल्ला गर्ने होइन बाहिर निस्कनु पर्छ ।
(खड्का नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ हुन्)